Yaalii 'fonqolcha mootummaa': 'B/J Asaamminaw Tsiggee baajaajin miliquuf yeroo yaalan ajjeefaman' - BBC News Afaan Oromoo
Yaalii 'fonqolcha mootummaa': 'B/J Asaamminaw Tsiggee baajaajin miliquuf yeroo yaalan ajjeefaman'
28 Waxabajjii 2019
Ajjeechaan sukkaneessaa angawoota mootummaa irratti raawwatame adeemsa cee'umsaa biyyattii hin gufachiisu jedhe waajirri Ministira Muummee.
Yeroo ammaatti qaamoleen mootummaa federaalaa fi naannoo Amaaraa walin hojjechaa akka jiran ibsa miidiyaaleef har'a laatan irratti dubbi himtuun waajjira Ministira Muummee Billanee Siyyum himaniiru.
Ajjeechaawwan magaalota Finfinnee fi Baahridaaritti raawwatame irratti qorannoon sadarkaa olaanaa adeemsifamaa akka jiru dubbatan.
Naannoo Amaaraatti hanga ammaatti namootni 212 to'annoo jala oolu isaanii fi lakkoofsi shakkamtootaa kun dabaluu akka danda'us dubbataniiru.
'Lafa naasuun jirutti dogoggorri hin dhabamu'
"Gantummaa fi harma haadha ofii ciniinuun ala maal jenna?"
Magaalaa Finfinnee keessatti immoo eegduu Jeneraal Se'aare Mokonnin kan ture ajajaa kudhanii Masaafint Xigaabuu Mokonnin dabalatee, namootni 43 qabamuu isaanii Billanee Siyyum dubbatan.
Yaaliin fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa iddoowwan afuritti raawwatamuu isaa kan himan dubbi himtuun kun, yaalichi tumsa humnoota nageenyaa federaalaa fi naannootiin fashalaa'uu isaa himan.
Haala magaalaa Baahirdaar keessa ture yeroo ibsanis "jalqaba Birgaader Jeneraal Asaamminaw Tsiggee waajjira pireezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa keessatti argamuun ajjeechaa raawwatame qindeessaa ture," jedhan.
Haleellaa raawwatamen pireezidaantiin naannichaa Dr Ambaachaw fi Obbo Izaz Waasee yeroo ajjeefaman, yeroos madaa'anii kan turan Obbo Migbaaruu Kabbadaas boodarra du'aniiru.
B/J Asaamminaw ajjeechaa pireezidaantii naannichaa fi angawoota biroo erga raawwachiisanii booda, gara iddoo lammaffaa /guest house/ angawootni keessa jiraatan deemuu isaanii Billanee Siyyum himan.
Miseensonni 'Balderaas' sadi shororkeessummaan himatamuufi
'Ameerikaan MM Abiy biyya ni tasgabbeessa amantaa jedhu qabdi'
"Iddoo kanattis angawoota naannichaa biroo ukkaamsuun dabalataan hoogganaa miidiyaa mootummaa naannoo Amaaraatti bilbiluun haleellaan iddoowwan lamaanitti raawwatamuu isaa fi karoora gara fulduraa irratti ibsa akka laatu itti himee ture" jedhan.
Waajjira komishinii poolisii naannichaatti immoo komishinarri poolisii naannichaa fi ajajaa humna addaa naannichaa walgahiif waamun akka ugguraman taasisuu isaa himan.
Iddoon afraffaa mana jireenyaa komishinara itti aanaa poolisii naannichaa akka ta'e fi isaanis galmee namoota ajjeechaan irratti raawwatamuf karoorfatame keessatti akka argaman dubbi himtuun waajjira ministira mummee kun himaniiru.
Tarkaanfii humnootii nageenyaa federaalaa fi naannoo yeroo cimuttis B/J Asaamminaw miidhamuu isaanii fi konkolaataan miliquu isaanii himan.
Guyyoota lama boodas konkolaataa abbaa goommaa sadii ykn Baajaajiin gara Goondaritti miliquuf osoo jedhanuu iddoo Zanzalemmaa jedhamutti humna addaa naannichaan ajjeefamuu isaaniis Billanee Siyyum himaniiru.
Pirees Sekiretariin MM obbo Nigusuu Xilaahuun turtii BBC waliin godhan
27 Waxabajjii 2019
"Gantummaa fi harma haadha ofii ciniinuudha" - Obbo Dammaqaa Makonnin
26 Waxabajjii 2019
Iskindir Naggaa: Miseensonni 'Balderaas' shororkeessummaan himatamuufi
'Yaalii Fonqolcha Mootummaa': US MM Abiy biyya ni tasgabbeessa amantaa jedhu qabdi' jedhu Hermaan Koheen
'Yaalii fonqolchaa' fi baduu intarneetii namoonni maal jedhu?
‘MM Sudaan waan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwate ni dhaabsifna jedhan’
Mootummaan Naannoo Tigiraay 'Walta TV'tti dheekkame
Boriis Joonsan 'akka haaraatti nuuf bariite' jedhan
Gireettaa fi Tiraamp 'si arge diina arge' waliin jechaa jiru
'Ji'oota jahaan darban Oromoonni 64 ajjeefaman'
Magaalaa xiqqoo 'fokkisuun' itti kabajamu
'Walleen Sin Jaaladha caalaatti Itoophiyaa beeksisuu danda'a jedheen filadhe'
Ameerikaan qondaaltota Sudaan Kibbaa akeekkachiifte
Konkolaataan namni keessa hin turre nama galaafate